နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များစွာပါဝင်မယ့် ရန်ပုံငွေ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေအများကြီး စုပေါင်းပြီး ရန်ပုံငွေအဖြစ် ဘောလုံးကန်ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးတွေကတော့ အလှူခံမှာပါတဲ့။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များက ရန်ပုံငွေပွဲအဖြစ် ဘောလုံးကန်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံသွားကြဦးမယ်လို့လည်း ကိုဝေမင်းမောင်က ပြောပါတယ်။
‘’မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ရန်ပုံငွေရရှိစေရန် အနုပညာရှင်များ ပရိသတ်များနှင့် တွေ့ဆုံသွားပါမည်။ဘောလုံးကစားကြမည့် အနုပညာရှင်များ SPECIAL9( ထူးအယ်လင်း ယုန်လေး Nine One၊ထက်ယံ သားသား Ice Cold Oakgar )၊ Frenzo ( စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ နန္ဒစိုင်း . SNARE G . Fatt . Bunny Phyoe .)၊ နှင်းဆီ အဖွဲ့( မင်းမော်ကွန်း ကျော်ကျော်ဗို ထွန်းထွန်း ရဲလေး )၊ ပြေတီဦး၊ သူထူးစံ ၊ ကျော်ထွဋ်ဆွေ၊ လွှမ်းပိုင် ၊X Box နေမင်း ၊ ဒေါင်း ၊ မိုးယံဇွန်၊ နေဒွေး ၊ ကျော်ကျော် ၊ ဒီဖြိုး ဝေလျှံ ၊ အောင်လေး ၊ Morris (Project K )’’ တို့ ပါဝင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီနောက် ရန်ပုံငွေပွဲအတွက် ကစားကြမယ့် ဘောလုံးပွဲမှာ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်များစွာတို့ကလည်း တေးသီချင်းကောင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘’ဖျော်ဖြေသီဆိုမည့် အနုပညာရှင်များ R Zar Ni ၊ ဟဲလေး ၊ ဖြိုးပြည့်စုံ ၊ ထက်ယံ ၊ ဝေကြီး ၊ နီနီခင်ဇော် ၊ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ၊ Jewel၊ ကေကေမိုး ၊ BPML’’ တို့ပါဝင်မယ်လို့ ကိုဝေမင်းမောင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ သြဂုတ်လ ၁၄ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီက ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးတွေကလည်း ရန်ပုံငွေ ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အလှူခံကြဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘’အလှူခံကြမည့် အနုပညာရှင်များ ညီနန္ဒ ၊အလင်းရောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် စံရတီမိုးမြင့် ၊ ယုသန္တာတင် ၊ နေခြည်ဦး ၊ ခင်ဝင့်ဝါ၊ နွေးနွေးချစ်ဖွယ် ၊ ရွှေသမီး ၊ နန်းခင်ဇေယျာ ၊ ရတနာဗိုလ် ၊ သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ၊ အလှူရှင်များ ကိုနိုင်ဖြိုးကျော် ( Green Circle)၊ နေခြည်ဦး - သိန်း ၅၀၊ မမာလာဝင်း (UMG ) သိန်း ၂၀ ’’ လို့ ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ Myanmar Media7က ကြီးမှူးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့ရက်၊ အချိန် နဲ့ နေရာတွေကတော့ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းမှာ ညနေ ၃ နာရီက စပြီး ပွဲလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ၊ ရေး၊ မုတ္တမ၊ ပေါင်၊ သံဖြူဇရပ်၊ ဘားအံ စတဲ့မြို့တွေမှာ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းတွေ၊ စားနပ်ရိက္ခာတွေ လိုအပ်လျှက်ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီ လှူဒါန်းဖို့အတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေကြပါတယ်။